Madaxweyne Xaaf oo Diiday Baaqii Madaxweyne Farmajo ee Heshiskii Galmudug
Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf), Madaxweynaha Galmudug ayaa warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiskiisa kaga soo horjeestay baaqii Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in madaxda Galmudug ay isugu yimaadaan shir deg deg ah. Shirka uu ku baaqay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya...
Madaxweynihi hore Sheekh Sharif oo Ka hadlay Dhacdadii Lagu Gubay Axmed Dawlo
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qaarkood shacabka ku reebay dareen gaar ah. Shariif Sheekh Axmed ayaa si gaar ah u soo...
Booliska oo Gacanta ku dhigay Rag Burcad ah Gudaha Magalada Muqdisho
Hawlgal Ciidamada Booliska ay sameeyeen, ayaa waxaa lagu soo qabtay rag burcad ah, kuwaasi oo watay qoryo kala duwan oo dadka ay ku dhici jireen. Hawlgalka Koowaad ayaa wuxuu ka dhacay Xaafadda Soona Kay ee Degmada Hodan, waxaana lagu soo qabtay laba nin oo tuutaha ciidanka...
Burcad Badeed Afduubatay Shaqaala Sarnaa Markab
Wararka ka imaanaya dalka Nigeria ayaa shegaya in koox burcad badeed ah ay afduubteen shaqaala saarnaa markab. Weerarka ayaa waxaa uu ka dhacay xeebta Bonny,oo u dhaw Port Harcourt. Shaqaalaha markabkani oo lagu magacaabo Massoel ayaa waxay sheegeen in burcad badeeda ay...
Shirka Isku Xirka Cadaalada oo Looga Dooday Fulinta Go’amada Maxkamadaha
Ra’iisul wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay shirka billaha ah ee isku xirka bahda caddaalada dalka oo looga hadlay dardar gelinta qorshaha horumarinta hannaanka caddaaladda dalka, fulinta go’aannada maxkamadaha, la dagaallanka...
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 23 Sep 2018 magcaabay Wasiir cusub Digreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Puntland C.wali Gaas ayaa lagu cadeeyay magacaabistaan cusub ee uu sameeyay C.wali Gaas Madaxweynaha Puntland,...
Taliye Sare ka tirsan Nisa oo la Xiray
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xabsiga la dhigay Taliyihii hoggaanka Caafimaadka ee Hay’adda Nabad Suggida Somaliya, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan NISA. Dr. Xasan Axmed Maxamed Gacal oo ah hoggaanka Qaybta Caafimaadka ee Hay’adda Nabad Suggida ayaa shalay maqribkii...
Laba Ruux oo Ku Geeriyootay Shil Gaari Magalada Muqdisho
Laba ruux ayaa ku geeriyootay, ruux kale oo haweenay ahna waa ay ku dhaawacantay, kadib Shil ka dhacay Isgoyska kala qaybiya Degmooyinka Xamar Jajab iyo Xamar weyne. Shilka ayaa yimid, kadib markii gaari nooca waaweyn ee ciidanka isticmaalaan oo loo yaqaan BJ uu ku dhuftay laba...
Ciidamada Dawlada oo Toogasho ku Dilay Askari ka tirsanaa Booliska Somaliyeed
Ciidamo ka tirsan dowladda ayaa toogasho ku dilay askari ka tirsanaa ciidanka booliska Somaliya, sida ay inoo xaqiijiyeen hay’adaha ammaanka. Dilkan oo ka dhacay degmada Kaxda ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii askariga uu is hor istaag ku sameeyay guri dhisme ka socday oo...
War Deg-Deg ah:kooxo Hubeysan oo Dil Ka geystay Gudaha Suuqa Bakaaraha
Rag hubeysan ayaa isgoyska suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen wiil dhalinyaro ahaa oo watay dhar shacab ah. Dad goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa waxa ay sheegeen ninkan oo ka mid ahaa dhalinyarada rarta gaadiidka BL-ka inay madaxa ka toogteen laba dhalibyaro ah...